fihenam-bidy avo lenta amin'ny fampitomboana DW-HF-15kw-HLQ mpanamboatra induction
Home / fampakarana hafanam-be / Heater induction matetika matetika DW-HF-15
Sokajy: fampakarana hafanam-be Tags: HF heater, HF Fanaterana fantson-drano, Masinina fanafana HF, HF fanasitranana HF, fantson-tany, Masinina famerenam-pandeha ambony, indraindray
Heater avo lenta matetika DW-HF-15KW
Ny modely IGBT sy ny teknolojia mifototra, ny fahombiazan'ny fahombiazana, ny fahamendrehana ambony kokoa ny fandaniana fihenam-bidy;
Ny 100% cycle cycle, ny fiasana tsy tapaka dia mahazo alalana amin'ny output power;
Ny toetry ny tsy filaminana eo an-toerana na eo amin'ny toerany dia azo sokajiana mifanaraka amin'ny fahatratrarana ny fahamailana ambony;
fampisehoana ny hery mitam-pihariana sy ny fanamafisana ny famantaranandro sy ny hafanam-po;
Maro ireo asa atao amin'ny alàlan'ny fampirimana, ny tsy fahampian-drano, ny tsy fahombiazan'ny taom-pianarana ary ny zazalahy tsy manambady sy ny sisa, ny fiara dia azo arovana amin'ny fandringanana ary ny milina dia azo alaina mora foana.
mora ny fametrahana, ny fametrahana dia azo atao amin'ny tsy fahaizana manokana, ny fifandraisana rano ary ny herinaratra dia vita amin'ny minitra vitsy.
lanja kely, vitsy kely.
Ny endrika hafa sy ny haben'ny indraindray dia mety hovana mora foana ny hafanana.
Ny tombony amin'ny modely amin'ny timer: Ny hery sy ny fotoana fiasana ny vanim-potoana fanamafisana ary ny fitazonana fe-potoana dia azo ampiasaina, mba hahatsapana tsiranoka fanamafisana tsotra, ity modely ity dia soso-kevitra hampiasaina ho an'ny famokarana antonony mba hanatsarana ny miverina indray.
Ireo modely voatokana dia natao mba hifanaraka amin'ny tontolo maloto, ny mpamorona dia azo amina toerana madio mba hampitombo ny fahamendrehana; Miaraka amin'ny lanjany kely sy ny lanjan'ilay trafofa misaraka, mora ampiasaina amin'ny famokarana ny famokarana ary mora alaina ao anatin'ilay milina na fitaovana mihetsika.
modely DW-HF-15kw induction heater
Ny hery miasa fizarana tokana 220V / 50-60Hz
Ny dingana arahina (AC) 180V-250V
Max. power output 15 KW (azo atao ny manitsy ny 3-15KW)
Oximity oscillation 10-80 KHz
Max. ny vokatra ankehitriny 42A
Tandindomin-doza foana 100%
Mangatsiaka ny rano 5L / min (0.1mpa)
Fanosehana ny rano > 0.2Mpa
Ny halavan'ny habeny * width * height 500 * 240 * 450mm
Fiarovana amin'ny rano <40 ° C
fonosana Size 610 * 620 * 340mm, 0.13CBM
Gross lanja 40kgs
Packages kitapo hazo (plywood)
Fomba fitaterana amin'ny rivotra, amin'ny DHL na any an-dranomasina
ny fitsaboana hafanana ny fitaovana sy ny fitaovana
ny fametrahana ny loharano elektrika
Ny fanamafisana ny sambo tsy misy vilany ho fanalefahana
fanolorana fitaovana fanodinana
fanangonana metaly isan-karazany
famonoana fantsom-barahina sy varahina sy konektor ao amin'ny ozinina famokarana mari-pana sy ny sisa.
fanasan-tongotra ho fanoratana
fanesorana ny ampahany. Sns
Fiatoana fanasan-drivotra mahery